Al-Shabaab ayaa weerartay saldhigga dawladda Ay ku laheyd
Dagaal u dhaxeeyay ciidamada dowladda iyo al-Shabaab oo ka dhacay gobolka Gedo ayaa sababay in la weeraro saldhig ciidan oo ku yaal degmada.
Lama oga khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay ciidamada DKMG ah iyo Al-shabaab dagaalka ka dhacay degmada Buurdhuubo, iyadoo xalay fiidkii ay weerar ku qaadeen ciidamada DKMG ah oo baaraya goobta dagaalka.
Nuur Kadiye Ibraahim, madaxa amniga ee Burdhubo, ayaa warbaahinta u sheegay in ay iska caabiyeen weerarka al-Shabaab kadib markii ay heleen macluumaad ku saabsan dagaalyahannada al-Shabaab.
“Ciidamada dowladda wax dhibaato ah kama soo gaarin dagaalka, waxay ka hortageen canaasiirta al-Shabaab, waxay soo gaareen dhaawacyo iyo dhaawac kuwaas oo aan gadaal ka soo sheegi doono. Ciidamada marwalba way ka feejigan yihiin al-Shabaab. ayuu yiri Nuur Kadiye, madaxa amniga Burdhubo.
Ciidamada dowladda ayaa baaritaano ka sameeyay saaka aroortii duleedka degmada Buurdhob ee gobolka Gedo, in kasta oo aysan ka soo bixin wax natiijo ah oo ka soo baxay howlahooda iyo haddii ay xireen xubno ka tirsan al-Shabaab.
Gobolka Gedo inta badan waxaa ku sugan Ciidamada Dowladda, waxaana lagu biiriyay askar kale bilooyin kahor laga qaaday Magaalada Muqdisho, kuwaas oo lagu kala biiriyay Ciidanka ku sugan Degmooyinka waa weyn ee Gobolka.